သြစတြေးလျ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 4
ငြိမ်းချမ်းအေး - ခွ န် အားဖြ ည့် မိ င ယ်
သာထက်အောင် – လော်စပီကာနှင့် ရုပ်ရှင်ရုံထဲက နိုင်ငံတော်အလံ (မိုးမခ)၊ ဧပြီ ၂၁ ၂၀၁၆ ကမ္ဘာ့အဆင်းရဲဆုံးနိုင်ငံစာရင်းထဲက မလွတ်နိုင် မကျွတ်နိုင်သေးတဲ့ ရွှေပြည်ကြီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာတရားဝင်ရုံးပိတ်ရက် အများဆုံးနိုင်ငံစာရင်းထဲမှာတော့ အခုချိန်ထိ တံခွန်စိုက်ဆဲပါ။ ငွေကြေးတောင့်တင်းတတ်နိုင်သူများကတော့ ပြည်ပခရီး၊...
ငြိမ်းချမ်းအေး – လူအချင်းချင်း ရှိခိုးရခြင်း ကင်းဝေးပါစေ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၄၊ ၂၀၁၆ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်အသစ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ တရားဝင် လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာက ဓာတ်ပုံ တပုံကို တွေ့မိ ရင်း...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ကျားပစ္စည်းထိန်းရေး အလေးပေးပါ (မိုးမခ) ဧပြီ ၁၃၊ ၂၀၁၆ သင်္ကြန်အကြိုနေ့ နေပြည်တော်သင်္ကြန်ဆိုပြီ ခရိုနီရုပ်သံလိုင်းရဲ့ ပွဲမှာ လူရွှင်တော်ဆိုတဲ့ သူတွေက စင်ပေါ်ကနေ မိန်းမနှိမ်ရေး၊ မိန်းမ ဖိရေးကို...
သာထက်အောင် – အငတ်ထားမလား – လာဘ်စားမလား
သာထက်အောင် – အငတ်ထားမလား – လာဘ်စားမလား (မိုးမခ) ဧပြီ ၂၊ ၂၀၁၆ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးစာရင်းတွေထွက်လာပါပြီ။ ကန့်ကွက်သူမရှိ၊ အတည်ပြုပြီးဖြစ်သလို ပြည်နယ်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ရာထူးတွေကိုလည်း NLD က ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ အတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ ရခိုင်ပြည်နယ်ကတော့ သူတို့...
ငြိမ်းချမ်းအေး – သူ့လူကိုယ့်ဘက်သား၊ ကိုယ့်လူသူ့ဘက်သား (မိုးမခ) မတ် ၁၃၊ ၂၀၁၆ ကိုဖုန်းမော် အပါအဝင် ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံကြီး အတွင်းမှာ ကျဆုံးခဲ့တဲ့၊ တော်လှန်ရေး ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့တဲ့ ကျောင်းသားနဲ့ လူထု၊...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ‘ပင်နီ’ ဆိုရင် … ..
ငြိမ်းချမ်းအေး – ‘ပင်နီ’ ဆိုရင် … .. (မိုးမခ) မတ် ၁၁၊ ၂၀၁၆ ‘ပင်နီ’ ဆိုတာ အမေ လူထုဒေါ်အမာ ရေးဖူးသလို ပြောရရင် ချည်ဖြူ ကို...
ငြိမ်းချမ်းအေး – တံတိုင်းတွေဖျက် တံတားတွေ ခင်းပါ
ငြိမ်းချမ်းအေး – တံတိုင်းတွေဖျက် တံတားတွေ ခင်းပါ (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၆ “လူတဦးဟာ တံတားတွေ ပေါင်းကူးခင်းပေးရမယ့်အစား အုတ်တံတိုင်း နံရံတွေချည်းဆောက်ဖို့စဉ်းစားနေရင် ခရစ်ယာန်ဘာ သာဝင် မဟုတ်ဘူး..။” ပိုက်ဆံအားကိုးပြီး လူမျိုးရေးမုန်းတီးမှုတွေဖော်ဆောင်...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ချစ်သူများနေ့ကိုကြိုဆိုကြရအောင်
ငြိမ်းချမ်းအေး – ချစ်သူများနေ့ကိုကြိုဆိုကြရအောင် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄၊ ၂၀၁၆ ■ ဈေးကွက်ဝင် ချစ်သူများ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄) ရက်နေ့မှာ အနောက်ဥရောပခရစ်ယာန်ကမ္ဘာက သမိုင်းဖြစ်စဉ်တခုကို ဂုဏ်ပြုရင်း ချစ်သူများနေ့ အဖြစ် ခေတ်သစ်ကမ္ဘာတဝှမ်း နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိတာ...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ပင်လုံစိတ်ဓာတ် (မိုးမခ) ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃၊ ၂၀၁၆ မနှစ်က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရာပြည့်ပွဲ (၁၉၁၅-၂၀၁၅) အတွက် လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သဝဏ်လွှာပါးတော့ ဗိုလ်ချုပ်စိတ်ဓာတ်ကို (၃) မျိုး သရုပ်ခွဲပြဖူးတယ်။ ရိုးသားဖြောင့်မတ်ခြင်း၊...
ငြိမ်းချမ်းအေး – မဖြစ်မနေ ပြောရမယ့် ခြင်ထောင်ခန်းများ (သိကြသလားဟေ့.. Date Rape) (မိုးမခမဂ္ဂဇင်း၊ ဒီဇင်ဘာထုတ်) ဒီဇင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ အသက် ၁၈ နှစ် ပြည့်ပြီး အရွယ်ရောက်သူ၊ စိတ်ကျန်းမာရေး...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ရင်ဘတ်အရွယ်အစားထက် ဦးနှောက်အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ပါ
ငြိမ်းချမ်းအေး – ရင်ဘတ်အရွယ်အစားထက် ဦးနှောက်အရွယ်အစားကို ရွေးချယ်ပါ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ အခုနှစ်ပိုင်းမှာ မယ်စကြာဝဠာ၊ မယ်ကမ္ဘာ၊ နိုင်ငံတကာအလှမယ် ပြိုင်ပွဲတွေကို မြန်မာပြည်က အလှမယ်များ ဝင်ရောက် ယှဉ်ပြိုင်ကြသလို ကျား-မ...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ဇာတ်ကားတွေမရိုက်ကြပါနဲ့ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅ မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖ မျိုးဆက် ကျုပ်တို့အားလုံး အမှိုက်ကောက်၊ အမှိုက်ရှင်း၊ မြောင်းဖော်၊ မြက်နှုတ်၊ သစ်ပင်စိုက်၊ ရေ လောင်း၊...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ဘယ်သူတွေ ရင်ကြားစေ့ရမှာလဲ
ဦးညီညီဦး- နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ငြိမ်းချမ်းအေး – ဘယ်သူတွေ ရင်ကြားစေ့ရမှာလဲ (မိုးမခ) ဒီဇင်ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး၊ အတိတ်ကို မတူးဆွရေး၊ အနာဟောင်းတွေ မဖော်ထုတ်ရေး...
စောငို ကာတွန်း သာထက်အောင် – “နေရစ်ခဲ့တော့ ခေတ်ဟောင်း၊ စနစ်ဟောင်း၊ အကျင့်ဟောင်း၊ အတွေးအခေါ်ဟောင်း” (မိုးမခ) နိုဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅ “နေရစ်ခဲ့တော့ ခေတ်ဟောင်း…. မူသစ်ပြောင်းပြီလေ….” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေး ခုတလော...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ‘ခွေးခေါင်းပြောင်းပြန်ကပ်လိုက်သည်’ ခေတ်မှသည်… (သည်လေဒီးစ်နယူးစ် / မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅ အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန်ရေး လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေ၊ နိုင်ငံရေးအန်တုမှုတွေအကြောင်းပြောရင် မဟတ္တမဂန္ဒီ (၁၈၆၉ ဖွား – ၁၉၄၈...
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မဲပေးချိန် အမီ “ဆင်ခြင်ဉာဏ်ဖြင့်ရွေးချယ်ခြင်း” စာအုပ် ထွက်မည် (မိုးမခစာအုပ်စင်) အောက်တိုဘာ ၁၆၊ ၂၀၁၅ စာအုပ်ကို မြန်မာပြည်အနှံ့ နယ်မြို့များနှင့် ကျေးလက် တောရွာများက စာကြည့်တိုက်များ၊ ဘုန်းတော်ကြီးပညာသင်ကျောင်းများ၊ ဓမ္မကျောင်းများ...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ‘မိုးတွေ ရွာစွေ’ နဲ့ ဒီမိုးကို မခံစားရက်ဘူး
Photo Aung Htet ငြိမ်းချမ်းအေး – ‘မိုးတွေ ရွာစွေ’ နဲ့ ဒီမိုးကို မခံစားရက်ဘူး (မိုးမခ) ၁၀ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၁၅ ‘မိုးတွေရွာစွေ’ နဲ့ ဒီမိုးကို မခံစားရက်ဘူး..။...
ငြိမ်းချမ်းအေး – ‘ဒီမိုကရေစီ’ မှတပါး အခြားမရှိ (မိုးမခ) အောက်တိုဘာ ၉၊ ၂၀၁၅ ကျနော်ဟာ တိုင်းပြည်တဝှမ်း မြို့နယ်ကျေးရွာများက ကလေးသူငယ်အများစုလိုပဲ ဘုန်းကြီးကျောင်းက စာသင်ကျောင်းမှာ စာသင်ခဲ့ရတယ်။ သံဃာသြဇာကြီးမားတဲ့ ရပ်ရွာလူမှုအဖွဲ့အစည်းကို ကလေးဘဝကတည်းက...